ဌာနခွဲများအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သော သင်တန်းများပေးခြင်းဖြင့် ဓာတ်ခွဲဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင် သုတေသနဌာနနှင့် အခြားအထောက်အပံ့ပေးသော ဌာနခွဲများမှ တပ်ဆင်၊ ထိန်းသိမ်း၊ အသုံးပြုလည်ပတ်ခြင်းနှင့် တီထွင်မှုစသည့် အသိပညာ၊ နည်းပညာများနှင့်ဆိုင်သော
မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန၏ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဆောင်ရွက်ဆဲ သုတေသနလုပ်ငန်း များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်(က) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ သုတေသနလုပ်ငန်း (၉) ခုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။(ခ)၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါသုတေသနလုပ်ငန်း (၁၀)ခုကို ဆောင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းသည် အရေးပါသော ဓာတ်ခွဲသုတေသနများနှင့် ဓာတ်ခွဲနည်းပညာရပ်များ ပိုမိုတိကျစွာတိုင်းတာနိုင်စေရေးအတွက် ဂျာမန်တိကျတိုင်းတာမှုသိပ္ပံ (PTB) နှင့် ဓာတုဓာတ်ခွဲခြင်း လုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ (PTB) မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစေလွှတ်၍ ဓာတု ဓာတ်ခွဲဌာနခွဲမှ ဝန်ထမ်းများအားလေ့ကျင့်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို (၃-၇-၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Toward knowledge-based Economy with Science, Technology and Innovation as key Drivers for Sustainable Development. The Ministry of Science and Technology formed in 1996 has generated 316,144 graduates and degree holders relating to science and technology.
သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာ ​ဝန်​ကြီး​ဌာ​န​မှ ပြဋ္ဌာန်းရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဥပဒေများနှင့် မူဝါဒများ၏ အမည်စာရင်း(Draft Law)များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
(က)	သိပ္ပံနည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဥပဒေ(မူကြမ်း)
(ခ)	တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းနည်းပညာဥပဒေ(မူကြမ်း)(Draft Policy)
​နည်း​ပ​ညာ​နှင့်​သက်​မွေး​ပ​ညာ​ဦး​စီး​ဌာ​န​မှ ပြဋ္ဌာန်းရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဥပဒေများနှင့် မူဝါဒများ၏ အမည်စာရင်း(Draft Law)များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-